RASMI: Ousmane Dembélé oo la ganaaxay… (Miyuu seegayaa kulanka El Clasico?) - Hargeele - Wararka Somali State
RASMI: Ousmane Dembélé oo la ganaaxay… (Miyuu seegayaa kulanka El Clasico?)
(Barcelona) 09 Okt 2019. Ousmane Dembélé ayaa labo kulan oo horyaalka La Ligaha Spain ah la ganaaxay waxaana uu seegi doonaa kulanka El Clasico.
Xiriirka kubadda cagta Spain ee RFEF ayaa xaqiijiyey in Ousmane Dembélé la ganaaxay labada kulan oo ay kooxdiisa Barcelona la kala ciyaari doonto Eibar iyo Real Madrid.
Weeraryahankan ayaa laga saaray kulankii ay la ciyaareen Sevilla, waxaana la ganaaxi doonaa labo kulan, ciyaarta hore ee uu seegayo waa kulanka Eibar kaddibna waxa uu maqnaan doonaa kulanka ay Barcelona caasimadda Catalan ku soo dhoweyn doonto Real Madrid 26-ka bishaan.
Inkastoo gool dhaliyey kulankaas waxaa la tusay kaarka cas kaddib markii uu qalad ku galay Javier Hernandez, , isla markaana garoonka Camp Nou ka baxay ciyaarta oo labo daqiiqo ka dhimanayd.
Dembele ayaa markaa kaddib si xad-dhaaf ugu qayliyey garsoore Antonio Lahoz, waxaana la sheegay inuu ku yiri: “Waxaad tahay nin aad u xun.”
Weeraryahankii hore ee kooxda Borussia Dortmund ayaa garoomada ka maqnaan doona labadaas kulan ee horyaalka La Liga, isagoo seegi doona kulanka ay la leeyihiin Eibar iyo midka ay wajahayaan Real Madrid ee El Clasico dabayaaqada bishaan.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Liverpool Iyo Southampton ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Levante Iyo Barcelona ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Warar kala duwan oo ka soo baxaya heshiiskii uu Xavi tababare ugu noqon lahaa kooxda Barcelona